Biby fiompin’ny fianakaviana iray mipetraka ao Belambo, fokontany Anosibe, kaominina Kiranomena, distrikan’i Fenoarivobe. Dahalo raindahiny dimy lahy mirongo fitaovam-piadiana vita gasy telo sy zavamaranitra no nanafika teo an-tanàna. Noho ny hery tsy mitovy, nanjakazaka ireo malaso fa tsy sahy niatrika izany ireo fokonolona izay tanam-polo. Nianatsimo nihazo ny vahalavan’i Famoizankova ireo jiolahy.
Rehefa tafavory maro ireo mponina teny amin’ny manodidina dia nanaradia ireo dahalo ihany ny fokonolona. Raikitra ny fifanjevoana tamin’ny 5 ora hariva teo Farahitanibe, izay mbola ao amin’ny Fokontanin’Anosibe hatrany. Dimy tamin’ireo mpanara-dia no voan’ny tifitra varirarak’ireo olon-dratsy. Ny roa tamin’izy ireo izay raim-pianakaviana 58 taona sy tovolahy vao erotrerony 25 taona no maty tsy tra-drano. Tovolahy telo izay 23 sy 31 ary 35 taona kosa naratra mafy ary nentina namonjy ny toeram-pitsaboana.
Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny basy tamin’ireo fokonolona marika Baikal NR 08047509. Zandary enina avy ao amin’ny tobim-paritra Kiranomena sy ny vondron-tobim-pileovana Bongolava no nanatevina ny fanarahan-dia. Efa nampandrenesina ihany koa ireo mpitandro filaminana manodidina hifehy ny kizo.